के हाे मधुमेह ? रोकथाम कसरी गर्ने ? - Butwal Online
बुटवल, २५ साउन । मधुमेह अर्थात डाइबेटिसलाई सामान्य भाषामा चिनिको रोग भन्ने गरिन्छ । रगतमा ग्लुकोजको मात्रा बढि भएपछि हुने रोग नै मधुमेह हो । प्यांक्रियाज नामक ग्रन्थिबाट उत्पादन हुन् । इन्सुलिन हर्मोनको अनियमितता हुदा मधुमेह हुन जान्छ ।